Abenzi baseChina IPHEPHA ELIPHAKAMILEYO IPHEPHA abavelisi kunye nabathengisi | I-Aotian
Igama Umba:iphepha elinemifanekiso
Ubunzima:260g / m² 300g / m²
Uhlobo:Ubuso obunye kunye nobuso obubini
Faka isicelo kwi:Ukufota komtshato, ifoto yesatifikethi, ifoto yobugcisa, ikhadi lekhadi
Iphepha lokuprinta i-ink-jet ngumzimba ofumanayo we-inki ukusuka kumlomo wesiprinta se-ink-jet apho kubhalwe khona imifanekiso okanye isicatshulwa.Iimpawu zayo ezisisiseko kukufakwa kweinki ngokukhawuleza kwaye kukungasasazeki kwamathontsi e-inki.
1. irekhodi elilungileyo, amandla okufakwa kwe-inki eyomeleleyo, isantya sokungenisa i-inki, ubukhulu be-inki encinci yedrophu, ukumila ngokujikeleza;
Isantya sokurekhoda okungxamisekileyo, oko kukuthi, uxinizelelo oluphezulu, ithoni eqhubekayo, umfanekiso ocacileyo;
Ulondolozo lwe-3.good, iscreen sinokunganyangeki kwamanzi, ukukhanya ngaphakathi, ngaphakathi okanye ngaphandle kunogcino oluthile kunye nokukhawuleza; (4) ukutyabeka kunokukhawuleza kunye namandla, ukutyabeka akukho lula ukukrwela, akukho mbane u-static, isidanga sokugoba, ukugoba, ukugoba.
Ngokweempawu zayo, iphepha lokushicilela le-ink-jet lingahlulwa libe:
1.Ukuphosa ukutyabeka: inkqubo ye-micron-grade ye-silicon dioxide, ukukhanya kunye nobumhlophe bunokufikelela kwinqanaba lephepha lemveli, kodwa isiseko sephepha sisiseko sephepha;
Ukwandiswa: Izinto ze-polyene (PVA) zisetyenziselwa ukwenza i-Peng Run-shaped coating kwiphepha elisekwe;
Itekhnoloji ye-Micropore: Iphepha le-RC eligutyungelweyo lisebenzisa inkqubo ye-silicon dioxide, ukuyilwa kokuprinta kwe-inki engafaniyo nezinto eziphilayo, kwangoko ziyafana nokufunxwa kwamaselula micropore ekuthiwa yiphepha lemicropore.
Eli phepha linokusetyenziselwa ukwenza amakhadi oshishino. Iindleko ziya kuba sezantsi ngokwentelekiso kwaye ixabiso alikho phezulu njenge-PVC. Ingasetyenziselwa kuphela njenge-CARDS yeshishini elingenamandla okanye iphepha elenziwe ngesandla AMAKHADI abantwana Iphepha liqinile, liqinile kwaye lilukhuni, kwaye alonakaliseki lula.Kukho imibala emininzi ongakhetha kuyo
Egqithileyo IPHEPHA LEFOTI YEKHRAYITHI
Okulandelayo: IPHEPHA LAMAFOTO IGOLIDE NESLIVER
Iphepha lemifanekiso enombhalo
Iphepha leT-Shirt, Iphepha le-Sticker le-Glossy, IPhepha leMifanekiso eliMnyama, Ukuprinta iphepha kwiifoto, Iphepha lesinyithi leehempe, Iphepha lokuGqithisela elisekuhleni,